Amagama Womnyango Wezokuvakasha waseBahamas Abalingani be-FINN njenge-New UK PR Agency
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba zeBahamas Breaking » Amagama Womnyango Wezokuvakasha waseBahamas Abalingani be-FINN njenge-New UK PR Agency
Izindaba zeBahamas Breaking • Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • I-Caribbean • Industry Hospitality Industry • Izindaba • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • Izindaba ze-UK Breaking
I-ejensi ezimele yezokumaketha nokuxhumana emhlabeni wonke, i-FINN Partners, iqokwe nguMnyango Wezokuvakasha, Ezotshalomali Nezindiza eBahamas (BMOTIA) ukuhlinzeka ngezinsizakalo zobudlelwano bomphakathi zeThe Islands of The Bahamas e-United Kingdom. Ihhovisi lakwaFINN Partners 'UK lizosebenza njenge-hub agency, liphathe ezinye izimakethe zase-Europe kubandakanya i-Italy.
I-FINN izosebenza ukwenza isu lokuxhumana eliphelele nohlelo lwe-PR ukukhulisa uphawu lweBahamas e-UK.
Inhloso ukukhiqiza ukukhula okuphelele kwabafikayo kwezivakashi, ikakhulukazi ngokuhambisana nemizila emisha yezindiza yase-UK.
Izindiza zaseBritish Izindiza kanye nokwethulwa kwezindiza ezintsha eziqonde ngqo zeVirgin Atlantic ezisuka eLondon kusuka ngoNovemba 20, kuyindawo okuya kuyo ukubona ukwanda okukhulu kwezindiza.
Inkontileka ifaka phakathi umbono womkhankaso wokudala, ubudlelwane nabathengi nezokuhweba kanye nokwenza kusebenze, ukuxhumanisa ukuvakashelwa kokusakazwa, imicimbi, ukwesekwa komthelela, kanye nokuxhumana kwezinhlekelele.
Okumaphakathi nomsebenzi we-FINN weBMOTIA kuzoba ukusebenzisa isu eliphelele lokuxhumana nohlelo lwe-PR ukukhulisa ukubonakala komkhiqizo weBahamas emakethe yase-UK. AbakwaFINN Partner bazothuthukisa isiko lendabuko, umlando, imisebenzi yezokungcebeleka, imvelo kanye nokudla kwaseziQhingini zeBahamas, ukusiza ukukhiqiza ukukhula okuphelele kwabavakashi abafika lapho beya khona, ikakhulukazi ngokuhambisana nemizila emisha yezindiza yase-UK.
UMhlonishwa I. Chester Cooper, iPhini likaNdunankulu kanye noNgqongqoshe Wezokuvakasha, Ezokutshalwa Kwezimali Nezokundiza Kwezindiza zaseBahamas uphawule wathi: “Umbono wethu wukuba ngumholi wemboni yomhlaba wonke ekumaketheni nasekuphathweni kwezindawo, ukunikela ngokuqhubekayo emnothweni wezwe ochumayo. AbakwaFINN Partner basinikeze indlela ephelele futhi enobuciko ukusekela isu lethu nokusisiza sifeze izinhloso zethu zebhizinisi ukukhulisa ezokuvakasha ezivela e-UK. Siyaqiniseka ukuthi sikhethe umlingani we-PR ofanele ukukhuthaza indawo yethu enhle futhi silindele ukubambisana okuyimpumelelo. ”
UJoy Jibrilu, uMqondisi Jikelele, iBahamas Ministry of Tourism, Investment & Aviation, uphawule wathi, “Siyajabula ukuthi siqoke abalingani be-FINN njenge-ejensi yethu yezokuqopha e-UK. Isiphakamiso sabo sikhombise ngokusobala ukuqonda kwabo iziphakamiso zethu zomkhiqizo nezinhloso zokuxhumana, futhi ulwazi lwabo nobungoti bemakethe yaseCaribbean kungolwesibili. Iziqhingi zaseBahamas zinikela ngengcebo yamasiko, ezokungcebeleka nezothando ezithokozisayo esingeke silinde ukuhlanganyela nabahambi baseBrithani. Ngokuhambisana nokwanda kwezindiza ezisuka e-UK, manje yisikhathi esikahle sokuthi sikhuthaze ukubhuka okuvela kulesi sifunda. Sibheke phambili ekusebenzisaneni nethimba le-FINN ukuze siqhubeke nokwandisa ukuqwashisa ngeBahamas kanye nobuningi bendawo esiya kuyo. ”
UDebbie Flynn, Umholi Womhlaba Wonke Wokuzivocavoca, uFINN Partners uphawule wathi: “Siyazi ukuthi abahambi baseBrithani manje bafuna ukuzijabulisa, izindawo ezivulekile, ubuhle bemvelo kanye nokuhlangenwe nakho okunothile kwamasiko, kanti iBahamas inikeza lokhu ngobuningi. Ngokuqalisa kabusha kwamuva kwe-direct
Izindiza zaseBritish Izindiza kanye nokwethulwa kwezindiza ezintsha eziqonde ngqo zeVirgin Atlantic ezisuka eLondon ziya eBahamas kusuka ngoNovemba 20, lapho ziya khona zibona ukwanda okukhulu kwezindiza okwenza zikwazi
ifinyeleleka kalula kubahambi base-UK kunanini ngaphambili. Kukhona I ithuba elikhulu lokuthi sikhombise ukuthi indawo iya kuphi ukusiza ukukhulisa abafikayo abavela e-UK, futhi asikwazi ukulinda ukuqala ubudlelwano bethu noMnyango Wezokuvakasha, Wezimali Nezindiza eBahamas. ”
Iphothifoliyo ebanzi yeFINN Partners UK Travel ifaka phakathi amaqembu amahhotela ahamba phambili afana ne-Accor Luxury nezindawo ezibandakanya iSingapore, iCapital Region USA ne-Iceland.
Njengoba kuneziqhingi ezingaphezu kuka-700 nezindawo ezikhokhelwayo nezindawo eziyisiqhingi eziyi-16 eziyingqayizivele, iBahamas ilele nje ngamamayela angama-50 ukusuka ogwini lwaseFlorida, inikela ngokuphunyuka okulula okundiza okuhambisa izihambi kude nansuku zonke. Iziqhingi zaseBahamas zinemisebenzi esezingeni lomhlaba yokudoba, ukudilika emanzini, ukuhamba ngesikebhe, ukugibela izinyoni nemisebenzi esekwe emvelweni, izinkulungwane zamamayela wamanzi amangalisayo kakhulu namabhishi acwebile alinde imindeni, imibhangqwana kanye nabavakashi. Hlola zonke iziqhingi okufanele unikele ngazo ku- bahamas.com noma ku Facebook, YouTube or Instagram ukubona ukuthi kungani Kungcono eBahamas.
Mayelana ne-FINN Partners, Inc.
Isungulwe ngonyaka we-2011 kumigomo esemqoka yokuqamba nokusebenzisana ngokubambisana, abakwaFINN Partner sebephindwe kane ngobukhulu eminyakeni eyisishiyagalombili, baba ngenye yezinhlangano ezizimele ezikhula ngokushesha emhlabeni. Ijubane lokumisa amarekhodi enkampani egcwele ukumaketha nokuxhumana kungumphumela wokukhula kwemvelo nokuhlanganisa izinkampani ezintsha nabantu abasha ezweni le-FINN ngefilosofi efanayo. Ngabachwepheshe abangaphezu kuka-800, i-FINN inikeza amaklayenti ukufinyelela emhlabeni wonke kanye namakhono emazweni aseMelika, eYurophu nase-Asia nangobulungu bayo kwi-Public Relations Organisation International (PROI). Ikomkhulu eNew York, amanye amahhovisi e-FINN atholakala e-Atlanta, Boston, Chicago, Denver, Detroit, Hong Kong, Fort Lauderdale, Frankfurt, Jerusalem, London, Los Angeles, Munich, Nashville, Paris, Portland, San Francisco, Seattle, Shanghai. , Singapore, Southern California naseWashington, DC Sithole ku-finnnpartners.com bese usilandela ku-Twitter naku-Instagram ku- @ finnpartners naku- @ finnpartnerstravel. Ngeminye imininingwane ngabalingani be-FINN, vakashela fnpartners.com.